Nagu saabsan - Ningbo Hanvos Qiee Auto Parts Co., Ltd.
Ningbo Hanvos Qiee Auto Parts Corporation waxay leedahay nidaam maareyn tayo oo kaamil ah iyo cilmi baaris wax soo saar oo xooggan iyo karti horumarineed.
Shirkaddu hadda waxay leedahay in ka badan 300 nooc oo giraangirood ah, waxaa ka go'an horumarinta inay noqoto shirkad wax soo saar oo xirfad leh oo leh noocyada ugu badan ee rakaabka aluminium baabuurka rakaabka ee warshadaha ee Shiinaha.
Gawaarideena waxaa loo dhoofiyaa Mareykanka, Kanada, Ruushka, Talyaaniga, Koonfur Afrika, Australia iyo dalal kale oo ka badan 10 waxaanan la leenahay xiriir iskaashi oo muddo dheer deggan boqolaal macaamiil ah.
Hanvos Qiee Auto Parts Corporation oo ku taal bariga aagga horumarinta dhaqaalaha Binhai, waxay dabooshaa aag dhan 150 hektar. Heerka dhismaha warshadda oo ku salaysan heerka OE, xarumo taxane ah oo gudaha laga hirgeliyay, waxaa ka mid ah aagga gaarsiinta la gaarsiiyay, 147 qol oo shaqaale, qolka shirarka oo weyn, aagga madadaalada shaqaalaha iwm. Giraangirta Hanvos Qiee Auto Parts Corporation waxay maraan taxane tijaabo warshadeed ah iyo xakamaynta habraaca xirfadeed laga bilaabo heerka naqshadeynta ilaa alaabada la soo saaray, si loo hubiyo in giraangirihiba ay maraan kormeerka tayada si loo iibin karo. Alaabooyinkayaga been abuurka ah iyo kabka ayaa leh tiknoolojiyad qaangaar ah oo rinjiyeyn ah, chromatography coating dahaarka electrophoretic, electroplating iyo wixii la mid ah; ku dadaal inaad samayso giraangir kasta si aad u noqoto mid kaamil ah.
Xirfadeena Weyn & Hal -abuurka
Shirkaddu waxay dhistay warshad alwaax aluminium ah oo la alifay oo la shubay oo leh is -dhexgal ganacsi iyo wax -soo -saar. Shirkadda waxay leedahay tiro ka mid ah qalabka wax -soo -saarka iyo farsamaynta horumarsan iyo qalabka imtixaanka; waxaan leenahay laba khad oo rinjiyeyn ah, toban nooc oo ah qalabka wax lagu farsameeyo. Cabbirka ugu badan ee giraangiraha daawaha aluminiumku waa 24 inji, cabbirka ugu yar waa 14 inji, iyo soosaarka bishiiba waa 50000. Waxaan leenahay in ka badan 300 oo shaqaale ah, in ka badan 50 shaqaale xirfad iyo farsamo leh, oo leh awood xooggan oo horumar iyo wax soo saar leh.
Waayo -aragnimada Wax -soo -saarka
Talent heer sare ah
Kala -duwanaanta Gaadhiga
wax soo saarka billaha ah
Hanvos Qiee Auto Parts Corporation waxay fiiro gaar ah siisaa tafaasiil kasta, iyada oo leh adeeg xirfadeed ka hor iibinta iyo adeeg macmiil oo xoog leh.